Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem]
1 Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 7th September 2009, 8:02 pm
ကျွန်တော့်စက်ကို Main Counter ကနေ Internet သုံးလို့ မရအောင် ပိတ်ထားလို့ဘာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပေးကြပါအုံးဗျာ
2 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 7th September 2009, 9:08 pm
PUNK wrote: ကျွန်တော့်စက်ကို Main Counter ကနေ Internet သုံးလို့ မရအောင် ပိတ်ထားလို့ဘာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပေးကြပါအုံးဗျာ
Main Counter ကနေ ဘယ်လိုပိတ်လဲဟင် .. နောက်ဘာ software သုံးပြီး ပိတ်တာလဲ .. အဲဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဗျာ ..
3 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 8th September 2009, 6:54 pm
network ကြိုးဖြုတ်ထားရင်တော့မကူညီနိုင်ဘူးဟီး [You must be registered and logged in to see this image.]
4 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 9th September 2009, 7:33 pm
ရုံးမှာပါခင်ဗျာ တချို့စက်တွေကတော့ Internet သုံးလို့ရပြီး ကျွန်တော့်စက်ကတော့ မရလို့ဘာ network ကြိုးလဲတပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
Last edited by PUNK on 9th September 2009, 7:38 pm; edited 1 time in total
5 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 9th September 2009, 7:35 pm
ဒါဆို သူပြောသလိုများလား .. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 9th September 2009, 7:53 pm
ပြီးရင် network ထဲက properties ထဲမှာ ip လေးတွေထည့်ပေးပါဦး
7 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 9th September 2009, 8:01 pm
Ping ခေါက်ကြည့် ဖို့ ပြောချင်ပါတယ် ဗျာ ..
Request time out ဆိုရင် connection ကြောင့်ထင်တယ် .. IP တွေ မှားရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်
Destination unreachable ဆိုရင် ကြိုးကြောင့်ပေါ့ .. ကြိုးလွတ်ခဲ့ရင်ပေါ့ .. router မှာလည်း စစ်ကြည့်ပါဦး ..
နောက် Lan Setting မှာ တစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါ ..
အခု ဘာ လိုင်းသုံးတာလဲ မသိဘူးနော် .. MPT ဆိုရင် no proxy ဖြစ်သွားလို့ ပါ ...
သိသလောက်လေး ပြောကြည့်တာပါ .. မှားသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ... [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 9th September 2009, 8:28 pm
ဟုတ်ကဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်ခင်ဗျာ အခုလိုပြောပြပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 9th September 2009, 10:03 pm
ရတဲ့စက်ကကြိုးကိုကိုယ့်စက်မှာအရင်တပ်ကြည့်ပါ............ပြီးရင် connection ရမရကြည့်လိုက်ပါ.....
ရရင်တော့သေချာပါတယ်..........ကြိုးကဖြစ်နေတာပါ.........Network ခေါင်းတွေသေချာပြန်စစ်ကြည့်ပါ.......ပြီးရင်သေချာအောင်Network ကြိုးလည်းလိုက်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ..............မဟုတ်ရင်တော့ ping ရိုက်ပြီးပြန်စစ်ကြည့်ပါ........
10 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 15th October 2009, 2:50 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-10-06
isa server ထိုင်ပြီး ပိတ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ......
11 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 19th January 2010, 10:16 am
အင်တာနက်သုံးခွင့်ပေးတဲ့ PC နဲ့သုံးခွင့် မပေးတဲ့ PC ကို network ခွဲထားတယ်.
IP ကိုလည်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်. သုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ စက်နဲ့ သုံးခွင့်မပေးတဲ့ စက်ကို
ပြီးတော့ main counter ဆိုတာကြီးကဘာကြီးလဲသိရ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်.
12 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 26th January 2010, 5:17 pm
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ internet ရတဲ့စက်မှာ ကြည့်ကြည့်တော့ Lan Setting မှာ က //netsvr နဲ့ 8080 ကိုမြင်လို့ ကိုယ်စက်မှာများရမလားလို့ လုပ်ကြည့်တာလဲမရဘူးဗျ
run ထဲမှာ //netsvr လို့ရိုက်ကြည့်တော့ password တောင်းတဲ့ box ကျလာတယ်ဗျ
[You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုပြီးတော့မှ
အဲ့ဒါ username နဲ့ password နေရာမှာ ဘာထည့်ပေးရမှာလဲမသိဘူး
13 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 26th January 2010, 5:54 pm
PUNK wrote: ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ internet ရတဲ့စက်မှာ ကြည့်ကြည့်တော့ Lan Setting မှာ က //netsvr နဲ့ 8080 ကိုမြင်လို့ ကိုယ်စက်မှာများရမလားလို့ လုပ်ကြည့်တာလဲမရဘူးဗျ
[You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုတာ PUNK ပြောတဲ့ မိန်းကောင်တာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်
username နဲ ့password ဆိုတာကို အဲဒိမိန်းကောင်တာဆိုတဲ ့ကွန်ပျူတာရဲ့username နဲ ့password ကိုဖြည့်ရမယ်ထင်တယ်
ဖြည့်တာမှန်မှ အဲဒီမိန်းကောင်တာ ကရှယ် လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ယူသုံးခွင့်ရမယ်ထင်တယ်
ကွန်နက်ရှင်မိဖို ့အတွက်နဲ ့တော့ အဲဒီဟာusername နဲ ့password တွေမလိုလောက်ဘူးထင်တယ်
Lan>property မှာသာ ip ကိုသေချာဖြည့်ပေးဖို ့ပဲလိုပါတယ်
14 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 26th January 2010, 8:24 pm
အိုုင်ပီ setting မှာ gateway ip ရှိမယ်။
ရတဲ့စက်က အိုင်ပီနဲ့မတူနဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ် တစ်ခုကိုပေး။
ပြီးရင် gateway ထဲ့ပြန်စမ်းကြည့်။.
15 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 26th January 2010, 8:40 pm
ကွန်ပြူတာရယ်၊ ကြိုးရယ်၊ အားလုံးပြောင်လိုက်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ၊
16 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 29th January 2010, 9:12 am
လုံးဝမသုံးစေခြင်လို့ isa ထိုင်ထားတာလားဆိုတော့သိဘို့လိုနေပြီခင်ဗျ လုံးဝမသုံးစေခြင်ရင် တော့ အစ်ကို isa ကိုကျော်ဘို့ခက်ခဲပါလိပ်မယ်.. လုံးဝမသုံးစေခြင်လို့ ဆိုရင်တော့ ခက်ပါလိပ်မယ်..
17 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 29th June 2010, 4:30 pm
ISA Server မှာ Proxy run ထားပုံရပါတယ်. ကို့စက်က ip က static လား dhcp လား ကြည့်ပါ.
static ဆိုရင်တော့ ip filter လုပ်ပီး outbound access ကိုပိတ်ထားတာပါ. information အတိအကျရင်တော့ကူညီနိုင်ပါတယ်. dns ရောကျပါသလား dns ကျပီး internet access မရရင် proxy setting မှာပြောင်းပီး သုံးကြည့်ပါ...အဆင်ပြေပါစေ...
18 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 29th June 2010, 7:30 pm
ကိုယ့်စက်ကို ကိုယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ User Name ; Password ရိုက်ဝင်ရလား။
ရုံးက ဝန်ထမ်းတွေကို အဖွဲ့လိုက်ခွဲပီး အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့သူ မပေးတဲ့သူရှိလား။
Work Group အတူတူဘဲလား ခွဲထားလား။ အဲ့ဒီလိုဆိုရင်။ AD Serverver
ထိုင်ပီး Policies တွေနဲ့ ပိတ်ထားတာ ဒါဆို အင်တာနက်သုံးတဲ့သူ မသုံးစေချင်တဲ့သူ
ခွဲထားတာ အင်တာနက်သုံးလို့ရအောင်လို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။
19 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem] on 28th October 2010, 7:42 pm
internet cafe ဆိုင်မှာ..ကောင်တာကနေ.. run box ကိုပိတ်ထားလို့ပါ..အဲ့ဒါ..ဖွင့်ချင်ရင်..ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ..
bat file လည်း..သုံးပြီးဖွင့်လို့မရဘူး..ဖြစ်နေတယ်...
20 Re: Main Counter ကနေ ပိတ်ထားလို့ပါ [Problem]